Mkpado: McDonald's | Martech Zone
Ka ụlọ ọrụ wee nwee ike ịmasị ihe ma too n'uwa niile, ọ dị ha mkpa ịsụ asụsụ iri na abụọ iji kpọtụrụ 12% nke ndị na-ege ha ntị. Ebe ọ bụ na ihe karịrị 80% nke ego maka ụlọ ọrụ US na-abịa site na ndị ahịa ụwa, $ 50 + ijeri ọdịnaya #localization na #translation ụlọ ọrụ dị mkpa maka ịchụpụ ndị ahịa na ahịa ụwa. Agbanyeghị, ụlọ ọrụ ndị chọrọ ịsụgharị ngwa ahịa ngwa ngwa ha ma gbasaa mba ụwa na-enwe nnukwu nsogbu: ha
At DK New Media, anyị slogan bụ na Anyị na-enyere ụlọ ọrụ izute ha ahịa nwere. Ọ dabara n'ọtụtụ ọrụ anyị na - enye - site na ịmụrụ ngwaahịa, mmepe ọdịnaya, njikarịcha ahịa n'ịntanetị… ihe niile anyị na - eme bụ ịchọpụta ọdịiche dị na atụmatụ ma nyere ụlọ ọrụ aka mejupụta oghere ndị ahụ. Anyị agabeghị ka edenyere ya n'ahịa, mepee vidiyo vidiyo ma ọ bụ tinye jingle… mana ozi ya masịrị m.